Ajụjụ - Ningbo ere ákwà Union Imp & exp Co., Ltd.
Declọ ihe ndozi
Ngwaahịa oge okpomọkụ
Mpaghara Ngwaahịa Egwuregwu
Ime ụlọ Fitness Equipment
N'èzí Sports Ngwaahịa
Ngwa Nkwado Omenala
Ista ihe ndozi
Mpaghara Nkebi Ekeresimesi
Top China Sourcing Ukwu
Showlọ Ngosi Anyị
1688 onye nnọchi anya
Market Yiwu Online
Shantou ụmụaka ahịa
Akụkọ mbubata China
Ihe Nlere Antigen
FFP2 nkpuchi & KN95
1. Kedu ngwongwo m nwere ike ịzụta na Ahịa N'ogbe China?
1. Ekeresimesi na ihe ndi ozo 2. Ihe egwuru egwu 3. Ihe ndi di iche iche na ihe ndi ozo 4. Ihe ndi ozo na ihe eji eme akwa 5. Ogwe na akpa 6. Ngwongwo na ulo ulo 7. Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ 8. Ngwaọrụ akụrụngwa 9. Ngwaọrụ eletriki 10. Schoollọ akwụkwọ Jiri Ihe 11. Uwe na akwa akwa 11. Akwụkwọ ndina na akwa akwa ihe ndina 12. Ihe ndị eji eme akwa 13. Ihe Ntanetị 14. Ihe eji azụ anụ ụlọ 15. Ọtụtụ
Yiwu dịka ụlọ ahịa azụmaahịa kasịnụ n'ụwa. . Nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ịchọrọ ebe ahụ. N'ihi na mpaghara ọ bụla nwere ọrụ nke aka ya, yabụ anyị wuru ọfịs na Yiwu, Ningbo, Shantou, Guangzhou iji gboo mkpa ndị ahịa.
2. Kedu ka ọrụ gị si dị?
1. Isi mmalite ngwaahịa ịchọrọ ma zipụ nkwupụta
2. Ntụle ahịa ahịa Yiwu na nyocha ụlọ ọrụ
3. Ebe iwu na ịgbaso mmepụta
4. Ntugharị ngwaahịa yana imewe
5. nyocha na njikwa mma
6. Nchekwa nchekwa na ọrụ nkwado
7. Na-enye mbubata ndụmọdụ
8 Jikwaa dọkụmentị dị mkpa
9. Ndozi kọstọm na mbupu
Anyị nwere ike ime karịa ka ị chere
3. Mgbe m gara na yiwu, olee otu anyi si aru oru?
1. You na-ezitere m oge njem gị iji nyere gị aka itinye akwụkwọ ụlọ nkwari akụ na njem
2. Anyị ga-ahazi ndị ọrụ abụọ iji soro gị wee rụọ ọrụ n'ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe
3. Anyị ga-eziga ozi niile n'abalị ma ọ bụ bipụta akwụkwọ ahụ echi ya.
4. kwesịrị ịga n'ọfịs m iji lelee ma kwado iwu ahụ tupu ị hapụ Yiwu.
Anyị ndokwa ihe niile tupu oge eruo, dị ka: hotel, iga, mkpara, ngwaọrụ (teepu, akwụkwọ, igwefoto etc ..), factory ọmụma, ngwaahịa Sourcing ọmụma. Clients echegbula ọrụ Yiwu.
4. Ọnụahịa gị ọ dị ala karịa ndị na-ebubata ya 'si Alibaba ma ọ bụ Mee na China?
Ndị na-eweta ngwaahịa na nyiwe B2B nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ azụmaahịa, nke abụọ ma ọ bụ ọbụna nke atọ n'etiti ndị ahịa. Enwere ọtụtụ narị ọnụahịa maka otu ngwaahịa ahụ ma ọ na-esiri ike ikpebi onye ha bụ site na ịlele weebụsaịtị ha. China n'ihu nwere ike ịma, enweghị ọnụahịa kachasị ala na China.
Anyị na-emezu nkwa ahụ e kwuru na ọnụahịa ahụ dị ka nke onye na-ebu ngwaahịa na enweghị ụgwọ ọzọ zoro ezo. Anyị na-enye gị ụzọ dị mfe iji zụta ngwongwo site na ndị na-eweta ngwaahịa dị iche iche nke nwere ike ịdị na obodo dị iche iche.
5. Ogologo oge ole ka iwu m ga-ewe?
. Oge nnyefe a ga-adabere na ihe abụọ: nnweta ihe na ọrụ mbupu.
. Anyị na-enye ndị ahịa ọrụ njem dị iche iche, dịka awara awara, ibu ikuku, ụgbọ njem, ụgbọ njem, FCL na LCL.
6. Enwere MOQ ọ bụla mgbe ị na-etinye iwu n'aka gị?
Ọ bụrụ na ụlọ mmepụta ihe nwere ebuka zuru ezu, anyị nwere ike ịnabata oke gị;
Ọ bụrụ na ezughị oke, ụlọ ọrụ ga-ajụ MOQ maka mmepụta ọhụrụ.
7. Kedu ka anyị si akwụ ụgwọ?
1. Mgbe iwu etinyechara, ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ 30% nke uru ngwongwo dị ka deposti nye anyị (Ọgwụ mgbochi ọrịa chọrọ ịkwụ ụgwọ 50% nke uru ngwongwo dịka nkwụnye ego).
2. Nye mgbanwe usoro ịkwụ ụgwọ, okwu ịkwụ ụgwọ ọ bụla T / T, L / C, D / P, D / A, O / A dị na mkpa ndị ahịa anyị.
8. Ọ bụrụ na m zụrụ si China, ị nwere ike inyere m aka mbupụ?
Ee! Mgbe ị zụrụ n'onwe gị, ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere onye na-ebubata ya enweghị ike ịme ihe ịchọrọ, anyị nwere ike ịbụ onye inyeaka gị ịkwanye mmepụta, lelee ogo, ịhazi ndokwa, mbupụ, nkwupụta omenala yana ọrụ ahịa. Servicegwọ ọrụ ahụ nwere ike ịgbanwe.
9. Gini mere ichoro onye ahia ahia ahia
1. Ihe karịrị 80% nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe enweghị akwụkwọ ikike mbupụ nke ha
2. Ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị enwe Spanish na-asụ & ndị ọrụ bekee na-ekwu okwu na-arụ ọrụ na obere ndị na-azụ ahịa na China.
3. Ọtụtụ n'ime ndị na-eweta ngwaahịa ha kwenyesiri ike dịka ụlọ ọrụ na-azụ ahịa na China mana ha na-eme ka hà bụ ezigbo ụlọ ọrụ na ndị ahịa enweghị ike ịgwa ha site na ozi adịgboroja na ntanetị.
4. Yabụ ịzụ ahịa gị n'ụlọnga nọ na mkpa. Ezigbo nkwụsịtụ ọrụ ndị na-azụ ihe na-azụ ihe nwere ike ọ bụghị naanị belata ihe egwu dị na ịzụrụ site na China kamakwa ọ nwere ike inyere gị aka ịchekwa oge, ụgwọ na mbọ na ịtọ ụtọ, nkwenye, njikwa mma yana ọrụ ahịa.
10. Kedu ihe bụ ike gị?
1. Ihe karịrị 23 afọ ahụmahụ nke mbubata & mbupụ gị n'ụlọnga
2. Nwere ihe karịrị 1200 mkpara. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ anyị nwere ihe karịrị afọ 10. Ha maara ahịa ahụ nke ọma ma nwee ike ịchọta ndị na-ebubata ya nke ọma.
3. Otu anyị wulitere mmekọrịta azụmahịa siri ike na ụlọ ọrụ ihe karịrị 10000 ndị China na ndị ahịa 1500 sitere na mba 120. Dị ka America, Brazil, Venezuela, Mexico, Colombia, Argentina, Spain, Peru, Paraguay na na
4. Odude ke Yiwu, nwekwara ụlọ ọrụ dị na Yiwu, Ningbo, Shantou, Guangzhou
5. Own 10,000m² showroom na 20,000m² nkwakọba
6 Ndị ọrụ 500 + na-asụ Bekee nke ọma na Spanish
E nwere ọtụtụ ike anyị na-edepụtaghị
11. Kedụ ka m ga-esi ruo obodo Yiwu?
The Yiwu ezigbo nso na Shanghai na Hangzhou, ị nwere ike na-elu na-agba ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ obodo ụgbọ ala site na Shanghai, ọ bụrụ na ị chọrọ, anyị na-ike ndokwa a ụgbọ ala bulie gị si n'ọdụ ụgbọ.
The Yiwu nwekwara ụgbọ elu akara si Guangzhou, Shenzhen, shantou na Hong Kong.
12. Kedụ maka nchekwa ọha nke Yiwu?
Obodo Yiwu dị ezigbo mma ma dịkwa jụụ, ị ga-ahụ ọtụtụ ndị mba ọzọ na-ejegharị na oge etiti abalị. Ha ga-aga ụlọ mmanya ma ọ bụ soro ndị enyi gaa oriri na nkwari.